Soo dejisan Simplenote 1.14 – Vessoft
WindowsXafiiskaQoraalada iyo JadwalkaSimplenote
Bogga rasmiga ah: Simplenote
Simplenote – buug-si fudud loo isticmaali karo buug-tilmaameedka aasaasiga ah. Barnaamijka waa mid aad u fiican in uu si dhakhso ah u qoro fikradaha iyo fikradaha kala duwan, samee liiska shaqooyinka, qorshooyinka mustaqbalka. Simplenote wuxuu kaa rabaa inaad sheegto sanduuqaaga boostada si aad u dhexdhigto dhammaan qalabkaaga, taas oo kuu ogolaaneysa inaad ku qorto qoraaladaada meel kasta. Software wuxuu adeegsadaa tagska oo ah qalab awood leh oo la xidhiidha baaritaanka la dhisay, sababtoo ah waxaa loo isticmaali karaa si loo helo qoraallada lagama maarmaanka u ah oo loo kala sooco. Simplenote wuxuu taageertaa ficil dib loo soo celin ah oo soo bandhigaya dhammaan isbeddellada taariikhda waxayna u suurtagelinayaan in ay ku noqdaan version hore. Sidoo kale, Simplenote wuxuu awood u leeyahay inuu wax wada-shaqeeyn ku sameeyo qoraallada kale ee adeegga, is-dhaafsiga qoraallada iyo qalabka loo diro internet-ka.
La wadaag qalabka kale
Isticmaal sumadaha iyo raadinta dhisme
Waxqabadka kooxeed ee qoraallada
Soo dejisan Simplenote
Faallo ku saabsan Simplenote
Simplenote Xirfadaha la xiriira
Amazon Kindle – softiweer waxaa loogu talagalay in lagu akhriyo buugaagta Kindle kumbuyuutarkaaga. Software-ku wuxuu leeyahay shaqadiisa lagama maarmaanka u ah maaraynta maktabadda elektaroonigga ah.